Musharax Dr Ibrahim Moalim Nur oo qado sharaf u sameeyay xildhibaanada Koonfur galbeed
Dr Ibrahim Moalim Nur oo ka mid ah musharixiinta ugu cad cad tartanka madaxtinimada maamulka Koonfur galbeed ayaa waxa uu qado sharaf ugu sameeyay hotelka Horyaal ee magaalada Baydhaba in ka badan 90 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur galbeed.
Musharax Ibrahim Moalim Nur ayaa waxa uu xildhibaanadii kasoo qayb galay qado sharafta ugu baaqay in maamulka Koonfur galbeed ay usoo xulaan shakhsi wax ka bedeli karo xaaladaha ay hada ku suganyihiin deegaanada Koonfur galbeed.
Dhanka kale intii lagu guda jiray xafladda qado sharafta ayaa waxa ay qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qayb galay xafladdaas ka jeediyeen halkaas qudbado ayaga oo ku baaqay in musharax kasta oo kusoo baxo doorashada in uu noqdo mid la shaqayn kara dowlada federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale waxa ay xildhibaanada ka hadleen hadalo kasoo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee lagasoo doorto deegaanada Koonfur kuwaasoo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho sheegayna inay dowlada federaalka faragelin ku hayso doorashada Koonfur galbeed, xildhibaanada ayaa u sheegay dhigooda Xamar shirka jaraa’id ku qabtay inay wax aan jirin ku eedaynin dowlada islamarkaasna ay doorashada ka dhaceyso Baydhaba ayaga ka masuul yihiin.
Magaalada Baydhaba ayaa waxa ay isku diyaarinaysaa doorasho ay ku tartami doonaan in ka badan 10 musharax.